Mayelana NATHI - HEBEI DEBIEN TECHNOLOGY CO., LTD
Eminyakeni yamuva nje, uDebien ubonile ukuqwashiswa okukhulayo emkhakheni wobunjiniyela kanye nensimu yamazwe omhlaba, kusungulwe ubudlelwane besikhathi eside nobuzinzile bokusebenzisana namabhizinisi adumile kanye namaqembu amaningana amazwe omhlaba emkhakheni onjenge-petroleum, i-petrochemical, i-water conservancy kanye nensimbi futhi enze umbono wayo waba ngokoqobo . UDebien unamathela ekubalulekeni kwezinsizakalo ezenziwa ngemuva kokuthengisa, uyaqhubeka nokwenza ngcono indlela yokuthengisa ngemuva kokuthengisa: kuyifilosofi yesevisi kaDebien ukuhlala egxile kumakhasimende futhi anikeze izinsizakalo zokuphendula okusheshayo nezekhwalithi. Siyazibophezela ukuthi sihlale sikulungele ukusiza noma ngabe ukuphi.
Kwenzeke izinguquko ezinkulu embonini yezokukhiqiza yaseChina phakathi kwenqubo yokuguquka komphakathi waseChina kusuka ekuthuthukisweni kwejubane elikhulu kuya entuthuko esezingeni eliphezulu. Imboni yezokukhiqiza yamukela amathuba entuthuko angakaze abonwe. Kodwa-ke, izinselelo ezizayo nazo zibalulekile ebhizinisini ngalinye. UDebien ulungise isu lakhe lokushintsha kusuka ekuthuthukisweni kwejubane elingaphezulu kweminyaka engama-20 kuya ekuthuthukisweni kwekhwalithi ephezulu; futhi kuguquke kusuka kumkhiqizi omkhulu we-valve eChina kuye kumkhiqizi we-valve onamandla kunabo bonke e-China, lapho i-Debien igxile kwikhwalithi, ihlose ukulethwa kwamakhasimende esezingeni eliphakeme, ithuthukise ibhizinisi ngokuqhathanisa nokwenziwe nge- "Made in China 2025", "Industry 4.0" ukuqamba kwezobuchwepheshe, ukuthuthukiswa kohlaza, ukuthuthukiswa okusimeme, ukuthuthukiswa okugxile kubantu. Sikholwa ukuthi uDebien uzogqama embonini yezokukhiqiza eChina ngomfanekiso omusha womkhiqizo kungekudala.
UDebien uhlose ukuphakama futhi wamukela konke ukwehluka. Iheha izingqondo ezinhle kakhulu ezivela kuwo wonke umhlaba ngezinga eliphakeme lokubandakanya futhi inikela ngesiteji sabantu abaqhutshwa yizinhloso ngamaphupho nezinkanuko zokukhombisa amakhono abo nokwenza ngcono ukuzethemba kwabo. Ngokwesimiso "sokholo oluhle nekhwalithi kuqala", senza abangane abavela kuwo wonke umhlaba futhi samukela abangani abaningi abazojoyina i-Debien futhi basebenzisane ngokubambisana ukuze babe nekusasa elingcono.